My Digital Diary: लकडाउनको पचासाैँ दिन
बैशाख ३०, मङ्गलबार
आजको दिन पनि कायाकैरनसँग सुरु भयो । तर ओछ्यान भने बी.बी.सी. पछि नै छोडियो । आज छोरी पनि मेरो पछि पछि नै उठिन् । अनि चा खाइसकेपछि मेरो छोरीलाई गृहकार्य गराउने नियमित कार्य सुरु भयो । आज छोरीले गणितको गृहकार्य गरिन् ।Write from 1 to 100, Write One=1 to Twenty=20, Count and write. अनि त्यसलाई पढेर सुनाउने काम सकेपछि, एकछिन फुटबल खेल्यौँ । त्यसपछि १० बजेको सेरोफेरोमा खान खाइवरी विद्यालय स्टाफहरुको फेसबुक ग्रुपमा आज कति खेरा जम्मा हुने र ICT तथा अनलाइन कलाससम्बधी छलफल गर्ने भन्ने व्यहोराको सूचना सम्प्रेषण गरेँ । तर कसैको केही रेस्पोन्स आएन । अहिले १०ः१७ पनि सम्म जम्मा ७ जनाको रियाक्ट र २३ जनाले हेर्नु मात्र भएको छ । नो कमेन्ट नो रेस्पोन्स ! जबसम्म सिकाइका लागि सिकारु तत्पर र उत्साही हुँदैन तबसम्म कोही पनि माइकालालले सिकाउन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त ! हजुरको के विचार छ कुन्नी ? कमेन्ट गर्नुहोला । आज विद्यालय गइएन ।
दिउसभरि नै यताउता नेट, फेसबुक र आजबाट गण्डकी प्रदेशले सुरु गरेको अनलाइन तालिममा सहभागी भएँ । नेल्टा केन्द्रिय अध्यक्ष मोतिकला म्याडम्, सल्लाकार गोविन्दराज भट्ट सर, रेलो स्पेस्लिष्ट विश्वराज गौतम सर र प्रा. जिवलाल सापकोटा सरसँग कलास लिने मौका पाइयो । आज देखि पर्सि सम्म त्यसैमा लागिन्छ । ३ः३० तिर खाजा खाइयो । अनि केहीबेर अनलाइनमै व्यस्त भएपश्चात साँझतिर छतमा ताजा हावा खान गइयो । छोरी, बसुन्धरा र म फुटबल पनि खेलियो । आज कोरोनाका पोजेटिभ केसहरु हर्लक्क बढेर २०८ पुगेकामा सबै सशंकित देखिए पनि बाटो हिड्ने मानिसहरुको चहलपहल झनै बढेको देखिन्थ्याे । लकडाउनलाई अझ कडा पार्ने र यसलाई
सबैले पालन गर्न भन्दै माइकिङ्ग गरेको पनि सुनिन्थ्यो ।
छतबाट कोठामा आएपछि, बसुन्धरा र छोरी तरकारी किनमेलमा गए । मेरो त के काम, मैले सुरु गरे सर्फिङ्ग ।
८ः३० बजे खाना खाइयो । खान खाइसकेपछि छोरीले घर आमा र दिदीलाई फोन गरिन् । आमा र बहिनीले उनी नर्सरी कक्षाको वार्षिक परीक्षामा ९९.७८ प्रतिशत् सहित प्रथम भएकोमा बधाई दिँदै आगमी दिनमा पनि यस्तै राम्रो गर्न भन्नु भयो । छोरीले हस् भनिन् । त्यसपछि उनको नृत्य सुरु भयोे । मोवाइलमा मेमोरी फूल भएकाले रेकडिङ्ग गर्न भने सकिएन । त्यसपछि आमा छोरी मोबाइलमा व्यस्त भए, म भने Blogging मा लागेँ ।